ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ငွေဆောင်ကမ်းခြေ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာပြပွဲကျင်းပ - Yangon Media Group
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ငွေဆောင်ကမ်းခြေ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာပြပွဲကျင်းပ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုများကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲ က ငွေဆောင်ကမ်းခြေရှိ ယမုံနာဦး ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအ တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း များ မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား အ လားအလာရှိသည့် နိုင်ငံခြားရင်း နှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော် မရှင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဂျပန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ(JICA)တို့မှဦးဆောင် ၍ ဂျပန်ပြည်ပကုန် သွယ်မှုအဖွဲ့ အစည်း(JETRO)နှင့် Myanmar Survey Research Co.Ltd.(MSR) တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပြပွဲကို ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှု ပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ သန်းမြင့်၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုး အောင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော် ခိုင်တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေး ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် တက်ရောက်လာ ကြသည့် ဧည့်သည်တော်များက ပြပွဲတွင် ခင်းကျင်းပြသထားသည့် ထုတ်ကုန်ပြခန်းများအား လှည့် လည်ကြည့်ရှုကြသည်။
ဆက်လက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပရာ အခမ်းအ နားတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင်က ကြို ဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ ပြီး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ဂျပန်အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA)မှ Chief Repre- sentative ဖြစ်သူ Mr.Masayuki Karasawa နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့မှ အဖွင့်အမှာ စကားအသီးသီး ပြောကြားကာ ဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပ ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့် အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန် မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ၊ စက်မှုကဏ္ဍ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင် ရေးကဏ္ဍ စသည့်ကဏ္ဍများအ လိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း များနှင့် တိုးတက်မှုများကို တာဝန် ရှိသူများက ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ ကြပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာကိုလည်း တင်ပြခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အ တွက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ အားသာချက်များခေါင်းစဉ်ဖြင့် စ ကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း ကျင်း ပခဲ့သည်။
နေ့လယ်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းရှင် များတွေ့ဆုံပွဲကို ဆက်လက်ကျင်း ပခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်း ရှင်များအချင်းချင်း မိမိစိတ်ပါဝင် စားမှုကဏ္ဍအလိုက် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးခဲ့ကြသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲသို့ ပါဝင်တက်ရောက် သူများသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာ ၁ ရက်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးရှိ အိမ်ရာစီမံကိန်းများ၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ပုသိမ် စက်မှုဇုန်နှင့် ပုသိမ်စက်မှုမြို့တော် တို့သို့ သွားရောက်လေ့လာကြ မည်ဖြစ်သည်။
(၂၁)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဆု ကံထူးရှင်ဆုငွေများကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှ စတင်၍ နေ့ချင်းပြီး ထုတ်??
လူငယ်မျိုးဆက်များ အဓိကစိန်ခေါ်မှုသည် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ဖြစ်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြ??
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်း နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်